ချစ်သူဟောင်းအတွက် ရင်ထဲက စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်တဲ့ ငဲငယ်လေး
သူကတော့ ရဲသွေးနောင် ဖြစ်ပါတယ်.
ငဲငယ်လေးက ချစ်သူဟောင်းအတွက် သူမရင်ထဲက စကားလက်ဆောင် ပြောလာခဲ့ပါတယ်. သူမရဲ့ ချစ်သူဟောင်းကတော့ တစ်ချိန်က မိန်းကလေး တွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ရဲသွေးနောင် ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုတော် ငဲငယ်လေးက သူ့ရဲ့ ချစ်သူဟောင်း အတွက် စကားလက်ဆောင် ပြောပြခဲ့ပါတယ်. တစ်ယောက်တည်း နေရတဲ့ ဘဝမှာလည်း သူမ ပျော်ရွှင်နေပြီလို့ Duwun Media ကနေ ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်.
'' လောလောဆယ် အချစ်ရေးကတော့ မရှိပါဘူး. ချစ်သူနဲ့ ပြတ်သွားပါပြီ. ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ပဲ ငယ်လေး သူ့အတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးချင်ပါတယ်. တစ်ယောက်တည်းဖြစ်မှ ပိုပြီးတော့ လွတ်လပ်ပါတယ်'' ဆိုပြီးတော့ Myanmar Music Wave မှာ ဖြေဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. လို့ ဆိုပါတယ်.
ငဲငယ်လေးဟာ ချစ်သူဟောင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တာကြောင့် အားလပ်ချိန်တွေ ပိုရတဲ့အတွက် အနုပညာအလုပ်တွေ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. အချစ်ကို ဦးစားပေးခဲ့ မိတဲ့ သင်ခန်းစာလည်း ရပြီလို့ ဆိုပါတယ်.
'' မိဘတွေကိုလည်း အချိန်ပိုပေးဖြစ်တယ်. အနုပညာဘက်ကို ပိုအာရုံစိုက်ဖြစ်တယ်. အခုဆိုရင် အခွေတောင်မှ သူနဲ့ ပြတ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော်လေး ပြီးသွားပြီ. အခုချိန်မှာ ငယ်လေး ကဘဝအတွက် ကြိုးစားရမယ့် အရွယ်ပါ. ဦးစားပေးခဲ့ မိတာလည်း ငယ်လေး မှားခဲ့ပါတယ်. အခုချိန်မှာလည်း အမြင်မှန်တွေ ရသွားပြီပေါ့နော်'' လို့ ဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်.
ငဲငယ်လေးရဲ့ ချစ်သူဟောင်းကတော့ အိပ်မက်ဆုံရာ သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော် ရဲသွေးနောင် ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ပိုင် စုံတွဲ ပုံလေးတွေကို Facebook Profile မှာ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီတင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်.
ငဲငယ်လေး ဟာ နာမည်ကျော် Iron Cross Band က ဂီတပညာရှင်ကြီး ချစ်စမ်းမောင် ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်ပါတယ်. သူမဟာ မတ်လ အတွင်းက '' အိမ်မက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်'' ဆိုတဲ့ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် သီချင်း လေးတွေ ဖြစ်တဲ့ '' ထာဝရ ချစ်သူ'' . '' ကျေနပ်ပါတယ်'' ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတွေကလည်း အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်.